This Ingersoll Rand sikuruwa mhepo compressor yakatsaurirwa mhepo mafuta separator atsanangura Ultra-naka regirazi faibha kugadzirwa ne American HV kana Lydall Company. Rakagadzirirwa kubvisa zvinenge 99.9% of vaporous wemisanganiswa mafuta kubva compressed mhepo. Mukuwedzera, richangobva yakatanga maviri-chikamu namira chinouya chete dzakakwirira Muitiro unobatanidza simba, rinoshandiswa kubvumira separator kushanda anowanzoita kunyange pasi tembiricha dzinopfuura 120 ℃.
Uyewo, kwakadai mhepo mafuta separator aigona kuva kwokunze kana akavaka-mune mhando. Kusvika 20 makore mukugadzira ruzivo, kambani yedu ajaira zviuru kugadzirwa michina. Ndiko kuti, tinogona kupa mukuru-mugiredhi OEM basa. Nesuwo tinogona kugadzira ari separator akashandiswa sikuruwa mhepo compressor upi zvizivikanwe Somuenzaniso, Atlas Copco, Sullair, Fusheng, Enzanisa, etc.
chigadzirwa ichi anoshandisa micron girazi faibha vaparadzane mafuta vaporous kubva compressed mhepo. Ipapo Madonhwe mafuta guru coalesced kubva vaporous mafuta achapiwa vaunganidza pasi sei regiravhiti. Pakupedzisira, akazviunganidzira mafuta ruchadzokera mafuta mutsara compressor. Panyaya iyi, iyi micron kuparadzana waanodzikisira mafuta kudyiwa dzedenga compressor.
2. Oil Content pashure Vakaparadzaniswa: ≤5 ppm
3. Kana kuti kumanikidza donhwe hapana kupfuura 0.1MPa, mafuta separator inogona kushandiswa kwemaawa dzinenge 4,000.
Mubvunzo: pamusoro parameters vari vakawana pasi ezvinhu yavose sezvavakatarirwa vanoshanda dzvinyiriro uye yavose sezvavakatarirwa chokubuda. Kunze kwaizvozvo, tembiricha kunonyanyisa hapana anopfuura 120 ℃. Uye mafuta kuGudhigodha lubrication inotongwa GB / T7631.9-1997 rinoshandiswa. Vasati Kuparadzanisa, mafuta tigutsikane hapana kupfuura 3000ppm.
Centrifugal Oil Separator | Michina Screw Compressor Accessories | Air Compressor Distributor
Air Compressor firita Zvino Separator
Filter And Separator nokutengesa